Donald Trump dia mpiantoka, mpanao politika teraka ny 14 Jiona 1946 tao New York. Izy no filohani Etazonia faha 45 izay nifaninana taminni Hillary Clinton.
Rutherford Birchard Hayes dia mpanao politika mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 4 Oktobra 1822 tao Fremont, Ohio ary maty ny 17 Janoary 1893 tao Fremont, Ohio
Manao pôtilita sy filôzôfy amerikana, i Thomas Jefferson niteraka taminny 18 Aprily 1743 tany Shadwell ary maty tany Monticello taminny 1826. Izy no filoha faha telo ny Etazonia, nihiditra filoha taminny 1801 izy, dia tapitra taminny 1809 ny mand ...
Ulysses S. Grant dia mpanao asa soratra, mpanoratra, mpanao politika mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 27 Aprily 1822 ary maty ny 23 Jolay 1885
I Benjamin Harrison V no rainy. Ny vadiny dia Anna Harrison. Ny zanany dia John Scott Harrison. Ny rahalahiny sy/na ny rahavaviny dia Carter Bassett Harrison.
Ny departemantani Aisne dia departemanta frantsay any avaratra atsinanani Paris. Ny anarana Aisne dia avy aminny renirano mitovy anarana miampita ilay departemanta. Ao aminny faritra Picardie no misy azy. Ny koady omenny Insee sy ny la Poste azy ...
I Bouches-du-Rhône dia departemanta frantsay ao aminny Provence-Alpes-Côte dAzur. Eo ambaravaronny renirano Rhône no misy ilay departemanta ary noho izany izy no mitondra ny anarana hoe Bouches-du-Rhône. Ny kaody INSEE sy kaodim-paositra ho ani B ...
I Gard dia anarana departemanta frantsay ao atsimoni Frantsa. Ny fisiany dia any andrefanny vavaranoni Rhône, izany hoe any andrefani Marseille. Ao aminny faritra Languedoc-Roussillon no misy ny departemantani Gard. Ny anarana iavianny anaranilay ...
I Hérault dia departemanta frantsay any atsimoni Frantsa, ao aminny faritra Languedoc-Roussillon. Ny fihavianny anaranilay departemanta dia avy aminny reniranonamorontsiraka mitovy anarana mampita azy. Heraultey no fiantsoana ny mponina mipetraka ...
I Maiôty na Maôry dia tamba-nosy departemanta frantsay any andrefanny tamba-nosy Kômôro, any avaratra andrefani Madagasikara. Ao aminny lakandranoni Mozambika no misy azy; ny renivohiny dia Mamoudzou, ny tanàna lehibe indrindra. Ilay faritra dia ...
I Oise dia departemanta frantsay ao aminny faritra Picardie, any avaratri Île-de-France. Ny renirano mampta ilay departemanta, ny Oise, dia nanome ny anarany ho anilay departemanta. Ny kaody nomenny Insee sy ny la Poste dia 60.
I Somme dia departemanta frantsay ao aminny faritra Picardie, faritra any avaratry ny departemantani Oise. Ny renirano Somme no iavianny anaranilay departemanta mitovy anarana. Ny kaodinny departemantani Somme dia 80 ho anny la Poste ary ho anny ...
I Vaucluse dia departemanta frantsay ao aminny faritra Provence-Alpes-Côte dAzur. Ny kaody omenny INSEE sy ny la Poste ani Vaucluse dia 84. Ny anarana Vaucluse dia anarana avy aminny fiteny latina Vallis Clausa midika lohasaha mihidy. Ireo depart ...
Any Frantsa, ny kaominina dia fizarana administrativa, ny fizaram-paritany kely indrindra any Frantsa. Ny kaominina dia tanny tanàna na vohitra. Ny velarantaniny dia mety miovaova be mihintsy Taminny 1 Martsa 2008, misy kaominina 36 783 any Frant ...
Ny kaominina ao Frantsa dia ny fizarana farany ny firenena. Ny lehibenny kaominina dia atao hoe benny tanàna, satria tanàna iray matetika ny kaominina iray. Ny fivondronana kaominina dia atao hoe fivondronana ary ny fivondrondrana fivondronana di ...
20.8789°S 55.4481°E ﻿ / -20.8789; 55.4481 I Saint-Denis, Réunion dia kaominina ao aminny fivondronani Saint-Denis, ao aminny departemantani Réunion, ao aminny faritri Réunion, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 97411. I Gilbert ...
Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz dia mpanoratra, mpanao asa soratra, mpanoratra tantara lava mizaka ny zom-pireneni Polonia teraka ny 5 Mey 1846 ary maty ny 15 Novambra 1916. Loka Nobel ao 1905.
Isaac Bashevis Singer dia mpanoratra, mpanao asa soratra, mpanoratra tantara lava, mpanoratra ny tantaranny fiainany mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 21 Novambra 1902 tao Polonia ary maty ny 24 Jolay 1991. Loka Nobel ao 1957.
Joseph Conrad dia mpanoratra, mpanao asa soratra, mpanoratra tantara lava, mpanoratra fanoharana mizaka ny zom-pireneni Polonia, Fanjakana Mitambatra teraka ny 3 Desambra 1857 ary maty ny 3 Aogositra 1924.